၀ က်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များ - လူများအားသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်
၀ က်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များကို QR Code Generator ဖြင့်ပြုလုပ်နည်း
Website တစ်ခု QR Code လုပ်ပါ
ဒီတိုတိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကြပါစို့။ ရဖို့ကောင်းပါတယ် သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုလာတဲ့လူအများအပြား ဟုတ်လား ၎င်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာများနှင့်အဆင်ပြေပါသည်၊ သို့သော်မီဒီယာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြissuesနာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဤဒိုမိန်းကိုသင်၏ဖုန်းထဲသို့သင်မည်သို့ယူမှတ်သနည်း။
ဝက်ဘ်ဆိုက် URL ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် ဝဘ်ဆိုက် QR Code မီးစက်။ သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်မည်သူမျှသည်ထိုသို့ပြုရန်စိတ်ရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာမှသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလူအများနှင့်လူများပိုမိုလာရောက်ရန်မှာအဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်မီဒီယာအတွက်သာမက၊ သင်သိသောဒစ်ဂျစ်တယ် display တစ်ခုဖြစ်သည့် billboard သို့မဟုတ် screen တစ်ခုခုနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။
ဒီတော့အခုငါတို့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ရာကနေဒီကိုသွားနိုင်ပြီ။ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် QR ကုဒ်များ!
ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် QR ကုဒ်များကို QR Code Generator ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ
ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်း CTA ရှိပါတယ်။ ၀ ယ်ယူသူမှပြုလုပ်ပေးရမည့်အရာအားလုံးသည် ၄ င်းတို့၏ဖုန်းနှင့် voila ကိုထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ Landing စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေမည့်မည်သည့်အရာမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် URL အတွက် QR Code ကိုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့သင်တကယ်မလုပ်နိုင်ဘူး - အကယ်၍ သင်ဟာကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့လမ်းအသွားအလာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးချင်တယ်ဆိုရင်။
MRI ၏စစ်တမ်းတစ်ခုအရစားသုံးသူ ၅၃၁TP1T ၀ န်းကျင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့် ၀ ယ်လိုသည် (ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖော်ပြသောမီဒီယာ) မှဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ အရာရာတိုင်းဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေတယ် လူများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးရန် QR ကုဒ်များသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။
၁။ သင်၏ပုံနှိပ်စာတွင် manual URL ထည့်ပါ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး ကအမှန်တကယ်အမျိုးအစားများကိုဖြုန်းတီးရန်ဆန္ဒရှိသောဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပါ။
၂ ပြRနာဖြေရှင်း, QR ကုဒ်များကိုအသုံးပြုပါ။
URLs နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက် QR Codes များကိုဘာကြောင့်ရေးသင့်တာလဲဆိုတာသိသာထင်ရှားပါသည်။ QR ကုဒ်များသည်လှည့်ကွက်များစွာကိုလုပ်နိုင်သည် (ဥပမာ - ပင်။ ) QR code business card generator), ၀ ဘ်ဆိုဒ်လိပ်စာတစ်ခုသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ 2020 ၏အဖြစ်, ကျော် Web တစ်ခုလုံး၏ 53% သည်ယခုအခါမိုဘိုင်းဖြစ်သည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ နောက် ၅-၁၀ နှစ်အတွင်းဘယ်လိုကြီးထွားလာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထို့အပြင်ယနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းအားလုံးသည်၎င်းတို့၏ကင်မရာအက်ပ်တွင်ရရှိနိုင်သည့် QR Code စာဖတ်သူများနှင့်အတူလာသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ် QR ကုဒ်တွေကိုတကယ်လွယ်ကူပြီးစကင်ဖတ်ရလွယ်ကူပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ QR Code အတွက်မည်သည့်လင့်ခ် (သို့) URL အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မည်သည့်အရာကအကောင်းဆုံးမဆိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ၎င်းသည်အီးမေးလ်ညှစ်ခြင်းစာမျက်နှာ၊ CTA စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Youtube ဗွီဒီယိုမင်းရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာ သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာကိုတင်ပါ။ အောက်ခြေလိုင်းမှာ - URL ရှိသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းကို QR Code သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Youtube ဗီဒီယိုများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များဖန်တီးပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲ။
#1 သင်၏ Pixel ကို Google Pixel နှင့် Google Analytics မှပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
၎င်းသည် ၀ င်ငွေနှင့်အပြောင်းအလဲကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအများဆုံးသောသတိမမူသည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်က website ည့်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူသည်သူ ၀ ယ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် ကြော်ငြာများနှင့်သူတို့ကို retarget။aကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် dynamic QR Code ကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်စစ်ဆေးသည်ကိုသင်ခြေရာခံနိုင်သည်။
#2 Lookalike ပရိသတ်များဖန်တီးပါ
ပထမအချက်အပြင်ထပ်တူအကျိုးစီးပွားများရှိသောအခြားသူများကိုရှာဖွေရန်သင်၏ QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသူများ၏အချက်အလက်များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပစ်မှတ်အုပ်စုနယ်ပယ်ကိုရှာဖွေခြင်းသို့မဟုတ်သင်တည်ရှိပြီးမသိခဲ့သည့်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ပစ်မှတ်အုပ်စုအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
#3 QR ကုဒ်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပျော်စရာကောင်းသည်
နောက်ကျော၌, QR ကုဒ်များတကယ်တကယ်စို့။ ဒါကြောင့်လည်းသူတို့သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြန်မြန်သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းပါ။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာများနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်သည်သူတို့အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ယနေ့ခေတ် QR ကုဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီရန်။ ၎င်းသည်လူများအားသင်၏ QR ကုဒ်များကိုလှုပ်ရှားမှုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် desgin အတွက်ရောင်စုံအသံထွက်များဖြင့်ဘောင်များ သုံး၍ ပိုမိုစစ်ဆေးရန်အားပေးသည်။
URL နှင့် Instagram တို့အတွက် QR ကုဒ်များ
#4 ပစ်မှတ် Millenials နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Zs
ဤနေရာတွင်ပိုမိုဖတ်ပါ။ တိုတိုပြောရရင် QR ကုဒ်တွေကမင်းကိုအားစိုက်ထုတ်ပြီးဆက်သွယ်ပြောဆိုစေတယ် အကြီးဆုံးစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများ ဒီနေ့ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခေတ်မီစေရန်နှင့်အကောင်းဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလေ့အကျင့်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄၁၁TP1T ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုများကိုရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် QR ကုဒ်များမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း QR Code သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးပျော်စရာကောင်းသည်။
လိပ်စာ (URL) ကို browser ထိပ်ရှိကော်ပီကူးပါ။
အဲဒါကို paste လုပ်ပါ QR Code Generator.
၎င်းသည်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။aကိုသုံးပါ QR Code Scanner သင်လိုလျှင်
သင်၏ QR Code ၏အသွင်အပြင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီး CTA တစ်ခု ပေး၍ လူတို့က၎င်းနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိနိုင်သည်။
vector format အရည်အသွေးမြင့် QR Code ကို download လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းကိုအချိန်တိုင်းသေချာစေသည်။
URL QR ကုဒ်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သိကောင်းစရာများ
၁။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များကိုမည်သူစစ်ဆေးနိုင်သနည်း။
အခြေခံအားဖြင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည့်ခေတ်သစ်စမတ်ဖုန်းအားလုံး။ ဖုန်းအဟောင်းများပင်a၏အကူအညီဖြင့် QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်နိုင်သည် QR Code Scanner အက်ပလီကေးရှင်း.
ရှည်လျားသော URLs နှင့် link များသည်ရှုပ်ထွေးသော QR ကုဒ်များဖြစ်သည်။ ရန် သင်၏ QR ကုဒ်များကိုသေးငယ်။ ရိုးရှင်းအောင်ထားပါ, Dyanmic QR Code အမျိုးအစားကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ ဦး တည်ရာအကြားတွင် shortlink တစ်ခုထားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ UTM အားလုံးနှင့်သင်ဆန္ဒရှိသော parameters များကိုခြေရာခံနိုင်သည့်သင်၏ URL အမှန်ရှိသည်။ ပျော်စရာအချက် - သေးငယ်သော QR ကုဒ်များသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ပိုမြန်သည်။
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာတည်းဖြတ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို A / B စစ်ဆေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ငြိမ် QR ကုဒ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသောဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော typos သို့မဟုတ်အနာဂတ်ပြproblemsနာများကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။ သင်အမြဲထိန်းချုပ်ထားပြီးစိတ်ပျက်စရာနှင့် QR သင်္ကေတအဟောင်းများကိုအစားထိုးရန်သင်၏ကံကြမ္မာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ QR ကုဒ်များသည်မည်မျှသေးငယ်နိုင်သနည်း။
2x2cm (သို့) ၀.၈ × ၀.၈ လက်မထက်နည်းသောအရာကိုမသုံးပါနှင့်။ ၎င်းသည်သင်၏ QR ကုဒ်များဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည် အားလုံးစမတ်ဖုန်းများအတွက်ဖတ်လို့ရအောင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပါ QR Code အရွယ်အစားလမ်းညွှန် သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက် QR ကုဒ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ယုံကြည်မှုရှိစေရန်အသေးစိတ်အတွက်။
၅။ QR ကုဒ်များသို့အမှတ်တံဆိပ်များထည့်ခြင်း
သင့်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် QR Code တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်သောအခါသင်၏လိုဂိုထည့်ရန်သေချာစေပါ။ ဤသည်ဆောင်နှင့်ဖောက်သည်ပေးသည် ပိုပြီးယုံကြည်မှု သင်၏ QR ကုဒ်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုငါတို့ရှိသမျှသည်လမ်းမှထွက်လာပြီဆိုပါစို့၊ သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော QR ကုဒ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်ကြစို့။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုပါသည်။
များအတွက် QR ကုဒ်များလုပ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း
အပေါ် QR ကုဒ်များ အဆောက်အ ဦး အပြင် Banners
အပေါ် QR ကုဒ်များ ပိုစတာများ
များအတွက် QR ကုဒ်များလုပ်ပါ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု